Safaaradda Britain ee Soomaaliya Oo Ka Hadashay Qorshayaasha Soomaaliya Ay Ku Caawineyso Iyo Balanqaadyo Ay Sameysay “Sawirro” |
Safaaradda Britain ee Soomaaliya Oo Ka Hadashay Qorshayaasha Soomaaliya Ay Ku Caawineyso Iyo Balanqaadyo Ay Sameysay “Sawirro”
Safiirka Britain ee Soomaaliya Danjire Harriet Mathews oo shir jaraa’id saxaafadda ugu qabatay xarunta safaaradda ay ku leedahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay qorshaha UK uga aadan sanadka soo socda arrimaha Soomaaliya, iyadoo xustay inay jiraan caqabado.
Ms Harriet ayaa tilmaantay in dowladda Ingiriiska oo kaashaneysa beesha caalamka ay dowladda kala shaqeyn doonaan sidii sanadka 2016-ka lagu heli lahaa hanaan doorasho, kaasi oo ay ku sheegtay in uu yahay mid aad u muhiimsan, isla markaana ay gacan ka geysan doonaan sidii loo dhameystiri lahaa hanaanka federaalka ah oo ay dowladda Soomaaliya qaadatay.
“Waxaan doonaynaa in aan ahmiyada siino sidii sannaka soo socda oo sannad adag u ah Soomaaliya, waxaa noo qabsamooya doorasho muhiim ah sannadka 2016, waxaana ku farax sanahay in dawladda Soomaaliya ay ka go’an tahay in doorashadaas ay dhacdo, waxaana rabnaa in aan kala shaqeyno anaga oo wadajir ah, beesha caalamka iyo inta ay khusayso lana xaqiijiyo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwa si hufan oo cad u dhacaan ayna yihiin kuwa wakhtiyeysan. Waxaa jirta agenda siyasaasadeed oo ah dhamaystirka iyo hir gelinta nidaamka Federalka” Sidaasi Waxaa tiri Safiirka Ms Harriet .
Safiirka Britain ee Soomaaliya ayaa xustay in ciidamada dowladda Britain ay Soomaaliya u soo direyso ay ka qeyb qaadan doonaan tababar siinta ciidamada AMISOM iyo ciidanka dowladda Soomaaliya, islamarkaana aysan shaqadoodu ahayn inay ka dagaalamaan aaga hore ee dagaalada.
“Ciidanka ay UK u soo daabulayso Soomaaliya waxa ay leeyihiin Mandate (Sharciyad) waxa ay la shaqeynayaan Ciidamada Qalabka sida iyo kuwa Amisom ee dagaalka kula jira Al-Shabab, waxa ay sidoo kale gacan ka geysanayaan in ay Soomaaliya ka taageeraan dhinaca dhismaha Kaabayaasha Dhaqaale iyo Bey’adda” ayay tiri Safiirka Britain Ee Soomaaliya.
Danjiraha Harriet Mathews ayaa tilmaamay in UK ay tahay dalka ugu horeeya ee dhanka beni’aadanimada wax ka qabtay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhanka adeegyada caafimaadka oo ay gurmad caafimaad u fidiyeen haween uur leh iyo 125 kun oo carruur la talaalay ah.
Ugu dambeyntii Safiirka Britain ee Soomaaliya Danjire Harriet Mathews ayaa tilmaamtay in dhanka horumaritna ganacsiga ay door weyn ka qaateen oo ay shaqo siiyeen 30 kun oo dhalinyaro ah, haatanna ay qorsheynayaan in sagaal kun oo kale ay shaqo abuuraan, isla markaana dowladda Britain ay Soomaaliya ugu yabooheyso 15- milyan oo bound si loogu caawiyo bulshada Soomaaliyeed.